Bill Gates 'tirada xaddiga qaddarka' kaarka Aqoonsiga bilaa wireless ee isha ku haya inaad qabtid cudurka 'coronavirus' iyo haddii lagu tallaalay: Martin Vrijland
Intii lagu gudajiray 'Reddit' weydii waxa aad rabto 'fadhiga, Bill Gates waxaa la weydiiyay su'aal ku saabsan cudurka' covidna-19 coronavirus '. Jawaabtiisu waa mid daaha ka qaaday. Wuxuu yidhi;Ugu dambayntii, waxaan haysan doonnaa dhowr shahaadooyin dijital ah oo aan ku muujineyno cidda dhowaan la dayactiray ama la tijaabiyey iyo cidda qaadatay tallaalka.Shahaadooyinkaas dijitaalka ah, Bill Gates wuxuu tixraaci karaa, tusaale ahaan, kuwa ay soo saartay MIT dhibco dhumuc ah (dhibcaha qiyaasta).
Xalka noocan ah ee bilaa-waayirka ah waxay u badan tahay inuu gacan-qabad la yeelan doono soo-gelinta ID2020, taasi waxay dooneysaa inay siiso aqoonsi 1,2 bilyan oo qof oo weli ku nool la'aan la aanta kaarka aqoonsiga (marka intaas oo dhan, taas ma lihid tiro la'aan). Bill Gates waa maal-gashade weyn waxyaalahan oo dhan Iyada oo loo marayo aasaaska Bill & Melinda Gates runtiina way cadahay inaan u dhaqaaqno nidaam xakameyn ah oo ay dad badani ku qabsan doonaan iyagoo ka baqaya cadowga weyn ee aan muuqan.
Waxaa muhiim ah in la muujiyo in dadku ay diyaar u yihiin inay dhiibtaan xorriyadooda oo dhan haddii ay cabsi ka qabaan. Cabsida ugu fiican waa cabsida dhimashada, iyo markaan la macaamileyno cadow aan muuqan oo dhamaan caafimaad iyo warbaahin iyo khubaro siyaasadeed ay naga codsanayaan inaan si dhab ah u qaadno, dadka badankood dhabarkooda beenta ayey u jiifaan.
Intooda badan malahan fikrad ah suurtagalnimada in dowladaha iyo warbaahinta ay u adeegsan karaan inay ku ciyaaraan shacabka. Markaas dad aad u tiro badan ayaa ku qasban inay ka shaqeeyaan beenta. Ma jiro qof fikiri kara in radaar saacad kasta saacad arkaa oo aan arkin taleefanka sidaas darteedna wax fikrad ah kama qabaan. Qofna ma rumeysan karo in qaar badan oo horeba looga tanaasulay, iyadoo cuntadooda hadda iyo mustaqbalka (ay u maleynayaan) mar horeba la iibsaday.
Runtii miyuu argagax badan ku yahay coronaviruskaas? Markaa dabcan waa wax faa'iido leh inaanu sida saxda ah u ogaanno cidda cudurka qaaday, goorta qofku soo bogsaday iyo in qof lagu duray tallaal. Ugu yaraan, taasi waa aaminaadda lagu kiciyaa dadka badan. Hoos u dhaca suurtagalka ah ayaa la qaddimaa. Hoos u dhacaas ayaa xitaa loo arkaa indho-sarcaad iyo fikirka shirqoolka.
Toddobaadyo yar gudahood, qof kasta oo dhaliilo badan waxaa laga yaabaa xitaa in loo arko inuu khatar ku yahay bulshada. Tan waxaa ugu wacan dadkaasi waxay noqon karaan kuwa fallaagoobay oo qatar ku ah dadka kale; xiitaa haddii ay mar hore u hoggaansan tahay 'fikradaha qaldan'. Markaa iska xir. Ka dib oo dhan, GGZ waajibka daryeelka caafimaadka maskaxda ee khasabka ah ayaa mar horeba dhaqan galay laga bilaabo 1 Janawari.
Haddii, dhowrkii bilood gudahood, aan ka beddelanay dimuqraadiyad sham ah loona beddelo nidaam shuuc-wadaag oo tikniyoolajiyad ah muddo bilo ah dhibaatadan Coronavirus, qof walba wuxuu hadda ku tiirsan yahay gobolka xagga dakhliga (eeg eeg) sharraxaadkan). Karootadaas horteeda xoogaa yar oo amniga dhaqaalaha ah ayaa dad badan ku qancin doonta waqti argagax leh. Cabsida daran ee dhimashada iyo tirada badan ee dhimashada (oo ay muujiyeen warbaahinta) ayaa sidoo kale wadada u xaaraya tilaabooyinka qoob-ka-ciyaarka, oo ay ku dheehan karaan waxyaabaha khatarta ku ah bulshada (oo aan qaylo lahayn).
Markaa qaybta dadka ka hartay waxay ku dhegi doonaan nidaam dijitaal ah oo kormeeraya dhaqdhaqaaq kasta, kuna xiraya dakhliga iyo kharashyada oo lagu daray xorriyadda dhaqdhaqaaqa dabeecadda, caafimaadka iyo dawooyinka khasabka ah iyo tallaalka. Meesha ay moodayeen inay dammaanad qaadi doonaan xorriyadda iyo nabadgelyadooda iyagoo la dagaallamaya gacan qabashada gobolka (ama u dagaallamaya siyaasadda gobolka baqdin ama iska-hor-imaad), ka dib iyaga laftoodu waa dabin. Ma jiraan wax ka taagan wadada ugu dambeysa ee lagu qeexay buuggayga.
Fadlan sidoo kale akhri qodobbada ka soo baxay usbuucii hore, kaas oo aan kuugu sharraxay hannaanka kor ku xusan si faahfaahsan. Hadaad akhriday buuggayga iyo waxa ku soo kordhay, waxaad ogaan doontaa inaadan u baahnayn kaar aqoonsi, dhibca ID ah ama waxkasta oo aqoonsigaaga run ah. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa rajada ay u leedahay qof kasta oo ogaada.
Soodhawrka xiriiriya: siencemag.org, id2020.org, biohackinfo.com
Bill Gates 2017: "Faafida soo socota waxa ay si fiican uga soo kicin lahayd shaashad kombiyuutar"
Dhacdada 201 corona virus oo jimicsi ah 6 usbuuc ka hor faafinta Wuhan, ayaa ka dhigeysa xaalad isku mid ah
Tags: Bill, coronavirus, Covid-19, dhibco, featured, Foundation, Gates, ID2020, Melinda, faafa, galmada, Reddit
24 Maarso 2020 at 01: 28
Shabakada "Bill Gates" waxay si dabiici ah u horseedaysaa tuhmanayaasha caadiga ah, oo qayb ka ah maalgelinta ay la wadaagaan Microsoft, Gavi Unilever, Carbyne, Postcode Loterij, kuwaas oo ugu dambeyntii aan ka badnayn hay'adaha hore.
Basaas muhiim ah shabakadan oo lala xiriirin karo Epstein ayaa goor dhaw la shaaciyay.
marka la soo gaabiyo, xallinta ficil-celinta
24 Maarso 2020 at 01: 29
24 Maarso 2020 at 10: 44
@Salmon, la yaab iguma ahan markii aad aragto sida ay hawraarradu u socdaan.
24 Maarso 2020 at 12: 40
Xiriirkaan ajandaha Wadajirka ah waa mid aad u xiiso badan, waxaa laga xaqiijiyay kanaallo kala duwan.
Wareysiga: Haddii ay dhacdo Inaadan Garan, Tani waa La-wareegida Bolshevist West Wide
Waa Amarka New World hirgelinta Agenda 2030 iyo '' Communismism '', oo ah kaliya Communism 2.0.
24 Maarso 2020 at 16: 01
Unilever dhab ahaantii waa ku lug leedahay marka la eego falalkii ugu dambeeyay, Rutte miyaanay ka imaanin Unilever?
Ameerika gudaheeda iyaguna si lama filaan ah ayey u soo saareen wax ka badalida Sharciga, waxay i xasuusineysaa Sharciga Patriot-ka. Laakiin taasi dabcan waxay ahaan doontaa mid si uun u dhacdaa 😉
26 Maarso 2020 at 02: 11
Marka waa Plandemic:
Fauci: 'Shaki kuma jiro' Trump wuxuu la kulmi doonaa cudur faafa oo la yaab leh
Anthony S. Fauci, MD, oo ah agaasimaha Machadka Qaranka ee Xasaasiyadda iyo Cudurada Infekshinka ah, ayaa sheegay in “Shaki kuma jiro” Donald J. Trump waxaa lagala kulmi doonaa cudur la yaab leh oo faafa marka uu madaxweynaha yahay.
27 Maarso 2020 at 05: 44
Waxaa jiri doona faafitaan naxdin leh
29 Maarso 2020 at 23: 54
Bill Gates wuxuu adeegsan doonaa microchip implants si loola dagaallamo coronavirus
Oggolaanshaha, oo ay weheliso Microsoft iyo Avanade, waxay abuureen tusmo ku saleysan aqoonsi ku saleysan biometric & blockchain kaasoo lagu soo bandhigay Shirweynihii ID2020 ee UN-ka bishii Juun 2017.
30 Maarso 2020 at 11: 23
Waa been been da'da jiifa
karooto ku yaal usha
buugga faaruq ah
Maskaxda maskaxda ee teknoolojiyadda dystopia
waxa soo bixi doona waa waqtiga
« Coronavirus, waa bulsho adkeysiisa ama guuleysata bini-aadamka?
Fadlan la soco: Dukumentiga Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) waa been abuur wararka been abuur ah »
Guud ahaan Wadarta: 1.278.457
SalmonInClick op 'Fashilka cabal' waa wax aan micno lahayn oo waa kuma 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Xaraare Xareed op 'Fashilka cabal' waa wax aan micno lahayn oo waa kuma 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?